Puntland oo eedeyn culus u jeedisay MW farmaajo & wasiir Jamaal – MANABOLYO NEWS
Puntland oo eedeyn culus u jeedisay MW farmaajo & wasiir Jamaal
Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Deperani oo la hadlay wariyeyaasha ayaa eedeyn culus u jeediyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kadib rabshadihii shalay ka dhacay degmadda Dhahar ee gobolka Sanaag.
Jaamac Deperani ayaa baabulka dibad-baxaasi ku eedeeyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) & wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya, Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo kasoo jeeda Puntland.
Afhayeenka ayaa xusay in dibad-baxaasi ujeedkiisu uu ahaa in fowda laga bilaabo degmada Dhahar ee gobolka Sanaag, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuxuu beeniyey in ciidamada Puntland ay rasaas u adeegsadeen dibad-baxayaasha, wuxuuna meesha ka saaray in khasaare uu ka dhashay rabshadahaasi.
“Madaxweyne Farmaajo iyo Jamaal waxaad u abaabusheen banaabaxa si aad fowdo uga kicisaan Dhahar, Laakiin sida rabteen ma noqon, cidna kuma dhiman cidna kuma dhaawacmin nabad ayuu ku dhammaaday Ciidamaduna amniga ayeey sugeen,” ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya, kadib markii ay dowladda federaalka Soomaaliya si adag u cambaareysay falkaasi oo ay ku tilmaamay inuu ah mid fool xun, iyada oo ku eedeysay damada amniga Puntland inay si ula kac ah xabad ugu adeegsadeen bulshada Dhahar.
Qarax lagu diley sarkaal sare oo ka tirsan DFS iyo cabsida is qaarijinta oo sii batey
Turkey voices concern over election unrest in Somalia
Shacabka Muqdisho oo si xooli ah ka qaxayaan Dagaalka u dhaxeeye DFS & Mucaaradka